မြေပုံများကို ဗီနိုင်းထုတ်ချင်လို့ - MYSTERY ZILLION
September 2009 edited February 2010 in Photoshop
ကျွန်တော်မြေပုံတွေ(မြို့ကွက်/ကျေးရွာ)ကို မိတ္တူဆွဲထားတဲ့ပုံအဟောင်းကို Scanner ဖတ်၊ ပြုပြင်ပြီး ဗီနိုင်းထုတ်ရာမှာ ကျွန်တော်ပြင်လိုက်တဲ့ ကျေးရွာနာမည်တွေဟာ ဗီနိုင်းပုံထွက်လာတော့ အလွန်၀ါးနေတာ တွေ့့ရပါတယ်။ (ဗီနိုင်းက ၄ ပေ ၃ ပေ ဆိုရင် Image resolution ကို 100 ခန့်ထားပါတယ်)။ Resolution 100 ထက်များသွားရင်လည်း ကျွန်တော့်စက်က မနိုင်လို့ ပါ။
အဓိကကတော့ မြေပုံထဲက စာတွေကို မြန်မာfont ထဲက ဘယ်font နဲ့ ဘယ် size ကို သုံးသင့်တယ် ဆိုတာ ကို အကြံပေးပါဦးဗျာ....
Corel Draw is good for map drawing.
I think you used Photoshop, bcoz alot of maps are shown by line, corel draw is vector image
best for Line Drawing.
photoshop is better for photo retoch & ......
what's? Eng or Bur ??
eng = arial is good it's not too thick and clearly.
bur= dont use thick fonts, very thick fonts disturb map lines. ok?
it's good using arthouse fonts in line drawing, arthouse2 is bold, I like it.
u finished Corel image, you can export to psd or jpg, resolution is 72 is ok.
if your vinyl get bigger, you can export reduce resolution.
it's not depends on DPI, for good quality, no need high resolution image, it may take long time work.
ကိုယ် ပုံမှန်လုပ်နေကျ ဒီဇိုင်းအရွယ် စကေးကိုက်အတိုင်း A4 or Legel ဆိုဒ်ပေါ်မှာ 300 dpi နဲ့လုပ်ပါ။ flatten လုပ်ပြီး Jpeg ကို resolution ်မလျော့ပဲ (compressing 12)အပြည့် save ပါ။ ဗီနိုင်းဆိုင်က tiff ဖိုင်လက်ခံရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ ဗီနိုင်းဆိုင် ရောက်မှ သူတို့ ဗီနိုင်းစက်နဲ့အတူလာတဲ့ software (များသောအားဖြင့် တရုတ်software ပါ) နဲ့ လိုချင်တဲ့ အရွယ် စကေးကိုက် ချဲ့ခိုင်းပါ။ ဗီနိုင်းစက် software များနှင့် Photoshop, Corel Photopaint လုပ်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကွာပါတယ်။ သူ့ Software နှင့်သူ ချဲ့လျှင် အဆင်ပြေတာများပါတယ်။ စမ်းသပ်ကြည့်ပါဦး။
မြေပုံတွေကို ထုတ်ရင် vector format နဲ့ ပြန်ပြီး retouching လုပ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ...အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ အချိန်မရရင် scan ကို drum scanner နဲ့ဖြစ်ဖြစ် same size scan တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ quality ကို ချဲ့ပြီး scan ပြီးမပြန်စမ်းကြည့်ပါဦး။ font ဆိုရင်တော့ english font ဆို arial နဲ့ မြန်မာ font ဆို စက်တိုင်းမှာ win researcher သုံးကြည့်ဖို့ အကြံပြုပါရစေ။ font size ကတော့ ပုံသေပြောဖို့ခက်ပါတယ်။ အောက်ခံပုံရဲ့ scale ပေါ်မူတည်ပြီးမှ ပုံထွက်အတွက်ကို ချိန်ပြီး အဆင်ပြေမဲ့ size ကိုသုံးရမှာပါ။
မြေပုံထုတ်တာစိတ်၀င်စားတယ်ဆိုရင်တော့ Geographic Information System(GIS) ကို လေ့လာဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ ပုံများ Draw လုပ်ရတာချင်းအတူတူ Georeference Data များဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ သီးခြား software များ (Geomedia, ArcView, ArcGIS)လိုမျိုးသုံးပြီး Database အနေနဲ့ ဆွဲထားရင်တော့ တွက်ချက်တာတွေပါ လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Output အနေနဲ့ jpeg လိုမျိုး image ဖိုင်များကို scale ရော Lat/Long အနေနဲ့ပါ တစ်ခါတည်း ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်များအသင်း(MCPA)မှာ စုံစမ်းကြည့်ပါ။ MICT PARK ထဲမှာ တစ်ခါတစ်လေသင်တန်း ဖွင့်တတ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အလွန်အသုံး၀င်လာမှာမို့ လေ့လာထားသင့်ပါတယ်။
Photoshop ပဲသုံးချင်တယ် ၊ မြေပုံကလည်း အဖြူအမဲမြေပုံပဲ ဆိုရင်တော့ အလွယ်နည်းတစ်ခုလောက်ပြောပြချင်ပါတယ်။ မြေပုံကို စကင်ကူးပြီး image---duplicate လုပ်ပါ။ alt+ I + M + G နှိပ်ပြီး image mode ကို gray scale မှာထားပါ။ ပုံကို flatten image လုပ်ပါ။ Ctrl + L နှိပ်ပြီး Level box ကို ခေါ်ပါ။ box ရဲ့ ညာဖက်အောက်မကျတကျလေးမှာ eye dropper သုံးချောင်းကိုမြင်ရပါမယ်။ အဲဒီထဲက လုံး၀ကြည်နေတဲ့ eye dropper ကို ယူပြီး ဖြူစေချင်တဲ့ နေရာတွေကို click လျှောက်ချပါ။ ပြီးရင် ပိုမဲနက်စေချင်တဲ့နေရာတွေကိုအနက်ရောင်ပြည့်နေတဲ့ eye dropper နဲ့ click လျှောက်ချပါ။ အဲဒီလောက်ဆို ပုံကအတော်သန့်သွားမှာပါ။ စမ်းကြည့်ပါဦး ။